सरकारलाई मिनेन्द्रको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवसम्मले निर्देशन दिन्छन्, काम गर्ने कसले? चिया बोक्नेले? :: PahiloPost
सरकारलाई मिनेन्द्रको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवसम्मले निर्देशन दिन्छन्, काम गर्ने कसले? चिया बोक्नेले?
10th June 2018, 05:31 pm | २७ जेठ २०७५
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाले सरकारलाई कामभन्दा पनि निर्देशन दिँदैमा ठिक्क भएको टिप्पणी गरेका छन्।
रातोपाटी डटकमको ५ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा नेता रिजालले सरकारले निर्देशन दिने मात्रै काम गरेको र काम गर्ने चाँहि कोही नभएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले दिन दिनै मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुहुन्छ। मन्त्रीले सचिवहरुलाई, सचिवहरुले कर्मचारीलाई,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सबैले निर्देशन दिन्छन्। काम चाँही कसले गर्ने? चियाँ ल्याउने कर्मचारीले?’
उनले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने काम बन्द गर्न समेत आग्रह गरे। नेता रिजालले समृद्धिका लागि नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई साथ दिने प्रतिवद्धता समेत दोहोर्‍याए।
सरकारले समृद्धिका नारा दिए पनि सरकारका काम समृद्धिका दिशातर्फ नगएको टिप्पणी गरे। ‘मैले यति भन्दै गर्दा काँग्रेसले लामो नेतृत्व गर्‍यो। बिकास किन भएन भनेर प्रश्न आउला,’ उनले भने, ‘हिजोको राज्यव्यस्थाले विकास गर्दैन भनेर नै हामी प्रचण्डसँग आएकै हौँ। संघीयतामा आएका हौँ। गणतन्त्रमा आएका हौँ। आगामी दिनमा पनि सहकार्य गर्छौ। विकासका लागि सहकार्य गर्न तयार छौँ।’
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले सरकारले समृद्धिको नारा दिए पनि आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न नसकेको बताए।
समृद्धिको नारा दिँदै गर्दा समृद्धिको मानक स्पष्ट पार्न समेत आग्रह गरे। उनले ६० लाख पढेलेखेका युवा विदेशमा भौतारिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसको कारण के हो भन्ने खोज्नुपर्ने बताए।
उनले विकास र समृद्धिका लागि राजपा नेपाल समेत प्रतिवद्ध रहेको बताए।
सरकारलाई मिनेन्द्रको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवसम्मले निर्देशन दिन्छन्, काम गर्ने कसले? चिया बोक्नेले? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।